Taariikhda SONGZ | Songz Gawaarida Hawada Co., Ltd.
SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING CO., LTD. waxaa lagu aasaasay magaalada Shanghai.
SONGZ waxay ka bilaabatay meheradda basaska qaboojiyaha, waxayna ka bilaabatay eber.
Xiamen SONGZ waa la aasaasay, kaas oo diiradda saaray R&D, soo saarista unugyada qaboojiyaha basaska.
Isla sannadkaas, waxaa la aasaasay qaybta qaboojiyaha gawaarida rakaabka ee SONGZ, oo loogu talagalay R&D, soo saarista & suuqgeynta qaboojiyaha gaariga rakaabka, HVAC iyo qaar ka mid ah qalabka dayactirka muhiimka ah.
Ganacsiga SONGZ wuxuu ahaa mid sanadba sanadka ka dambeeya korayay.
Shanghai SONGZ Warshaddii labaad ayaa la dhammaystiray, taas oo loogu talagalay inay noqoto saldhig dhammaystiran oo loogu talagalay soosaarida unugyada qaboojiyaha basaska iyo baabuurta.
Anhui SONGZ waa la aasaasay, taas oo ah iskaashi ay wada leeyihiin SONGZ iyo JAC.
Chongqing SONGZ ayaa la aasaasay. Chongqing SONGZ waxay diirada saartay saarida qaboojiyaha gaariga.
SONGZ waxaa u aqoonsaday Guddiga Sayniska iyo Teknolojiyada ee Shanghai inay tahay shirkad cusub oo tiknoolajiyad sare leh oo Shanghai ah.
Isla sannadkaas, SONGZ waxaa ku abaal mariyay shirkadda Shouqi Group inuu yahay Olombikada Beijing "Horyaal Adeeg" waxqabadka wanaagsan iyo adeegga taageerada inta lagu gudajiray Olombikada Beijing.
Shahaadada Ganacsiga Teknolojiyada Sare ee Shanghai
Olombikada Beijing "Horyaal Adeeg"
Shanghai SONGZ Tareenka Hawada Co., Ltd. ayaa la aasaasay, oo loo qoondeeyay R&D, wax soo saar & suuqgeyn qaboojiye tareen-qabe.
In kabadan 10 sano oo horumar ah, SONGZ waxay leedahay noocyo badan oo AC ah oo loogu talagalay gawaarida tareenka, sida AC ee tareenka, tareenka, monorail, metro (tareenka dhulka hoostiisa) taraamka iyo wixii la mid ah.
SONGZ waxay kujirtay Shenzhen Stock Exchange (lambarka kaydka: 002454) waxayna noqotay shirkadii ugu horaysay ee liis gareeysa ee warshadaha qaboojiyeyaasha gawaarida Shiinaha.
Isla sanadkaas, SONGZ waxaa lagu abaalmariyay inay tahay shirkad farsamo oo horumarsan oo ay maalgelisay shisheeye.
Beijing SONGZ iyo SuperCool (shanghai) Qaboojiye Co., Ltd. ayaa la aasaasay.
Beijing SONGZ waxaa loogu tala galay soo saarida nidaamyada qaboojiyaha ee gawaarida rakaabka.
Supercool waa iskaashi u dhexeeya SONGZ group iyo CIMC (China International Marine Containers Co., Ltd, oo ah weelasha ugu badan ee soo saara badaha adduunka.) silsiladda qabow.
Liuzhou SONGZ waxaa la aasaasay, oo u heellan soo saarista nidaamka qaboojiyaha ee MPV, SUV, baabuur iyo baabuur koronto.
Shanghai SONGZ wershad saddexaad ayaa la dhammaystiray, taas oo hadda ah HQ ee kooxda SONGZ. Tani sidoo kale waa saldhigga wax soo saarka caqliga iyo caqliga leh ee loogu talagalay unugyada qaboojiyaha baabuurta, unugyada qaboojiyaha baska, kombaresarada qaboojiyaha iyo kombaresarada korantada, iyo qaybaha dayactirka
Indonesia SONGZ ayaa la aasaasay. Tani waxay ahayd SONGZ warshaddii ugu horreysay ee dibedda ah, taas oo ah tallaabada ugu horreysa ee istiraatiijiyadda caalamiga ah ee SONGZ, oo ay ku xigto Lumikko oo ku taal Finland.
SONGZ waxay heshay oo haysay saamiyada Suzhou NTC, Beijing Shougang Foton iyo Finland Lumikko.
Suzhou NTC waa summad caan ah oo ah basaska qaboojiyaha suuqa Shiinaha. Lahaanshaha, SONGZ iyo NTC waxay ku midoobeen suuqa midow xoog leh xagga teknolojiyadda, wax soo saarka, iibka, adeegga.
Lumikko, waa magac caan ka ah Yurub waana soo saare tayo sare leh aaladaha kontoroolka heerkulka ee baabuurta waaweyn iyo isjiidka. Waa nidaam dhibic dayactir oo xoog leh diiradda saaraya wadamada Waqooyiga Yurub.
SONGZ waxay hirgalisay sanadguuradii 20aad waxaana la aasaasay xarunta tunnelka tunka dabaysha.
Isla sanadkaas, SONGZ waxay taariikh sameysay iyadoo soo saartay in kabadan 10,000 (toban kun) oo cutub oo qaboojiye bas ah hal bil gudaheed Nov.
SONGZ waxay wadar ahaan 54,049 unug oo qaboojiye bas ah u keentay suuqa Shiinaha iyo waddamada shisheeye, oo ay ku jiraan 28,373 unug oo qaboojiye baska koronto ku shaqeeya ah 2018.
SONGZ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. ayaa la aasaasay, taas oo ahayd tallaabada dheeriga ah ee caalamiyeynta SONGZ.
Isla sanadkaas, SONGZ waxay ku dhawaaqday istiraatiijiyadda lagu aasaasayo shabakad adeeg caalami ah iyadoo ugu yaraan 100 xarumood oo adeeg ah laga helo adduunka oo ka baxsan Shiinaha, si ay u siiso adeeg waqtigiisa ku habboon macaamiisheena caalamiga ah.
Isla muddadaa, wax-soo-saarka maxalliga ah ee Lumikko Shiinaha waxaa la ogaaday markii cutubkii ugu horreeyay ee LT9 iyo unugga L6BHS ee warshadda Shanghai ee Lumikko ay ka baxeen khadka safka.
SONGZ waxay heshay saami dhan 55% shirkadda Keihin-Grand Ocean Thermal Technology (Dalian) Co.Ltd , taas oo ah shirkad Japanese ah oo ixtiraam leh oo hoggaamineysa takhasus gaar ah u leh warshadaha hawo qaboojinta.